Mangina Amin’ny Voina ao an-Toerana ny Media ao Shina · Global Voices teny Malagasy
Mangina Amin'ny Voina ao an-Toerana ny Media ao Shina	Voadika ny 19 Desambra 2012 7:55 GMT
Zarao: Ankizy 20 no maty nandritra ny tifitra variraraka tany Connecticut, Etazonia tamin'ny 14 desambra 2012. Tonga dia nahahenika an'i CCTV manerana an'i Shina iray manontolo ny vaovao mampalahelo ary lohateny lehibe tamin'ny gazety tany Shina.
Nandritra io andro io ihany dia nisy voina hafa nitranga tao afovoan'i Shina tao: nisy lehilahy iray nanatsatoka antsy ka nandratra ankizy 22.
Saingy, voasivana avy hatrany ny vaovao. Tsy nisy na iray aza ny gazety sy ny filazam-baovao Shinoa nanamarika io voina nitranga tao an-toerana io. Ny hany loharanom-baovao nahitana ny vaovao dia tamin'ny alalan'ny Weibo, twitter-n'i Shina irery.
Pikantsary ny tatitry ny tsatok'antsy ao amin'ny TV Anhui hita ao amin'ny youku
Nahasarika ny olona io fomba fihetsiky ny CCTV sy ireo fampitam-baovao lehibe roa ireo, izay vetivety dia lasa lohahevitra mafana indrindra ao amin'ny Weibo [zh]. Mampitaha ny fomba fanehoana fifankatiavana ho an'ny ankizy any Etazonia sy any Shina ny mpiserasera ary manontany ny tsy sivana tsy ara-drariny sy ny tsy fanajana ny zon'olombelona any Shina. Miezaka ny mitati-baovao amin'ny alalan'ny famoahana ny sarin'ireo ankizy maratra amin'ny alalan'ny Weibo ny sasany amin'ireo mpiserasera.
Eto ambany ny sasany amin'ny fanehoan-kevitra avy amin'ny bilaogera sy mpaneho hevitra malaza ao amin'ny Weibo [zh]:
大鹏看天下: Rehefa tsy hitatitra io ianareo dia ho ataonay ihany! Raha narahirana ny toe-javatra tany Etazonia dia nitomany i Obama ary nampidina ny saina ho eny amin'ny atsasaky ny firenena iray manontolo. Nataon'ny CCTV lohateny lehibe ihany koa ny zava-nitranga. Mifanohitra amin'izany kosa fa raha maratra ny zaza shinoa, mbola milalao jeux ao amin'ny biraony ny tompon'andraikitry ny fampianarana ao an-toerana. Mangina ny gazety be mpanaraka rehetra, fahanginana mahamenatra. Amin'ny alalan'ny Weibo ihany no mba ahitana ny sombiny kely momba ny vaovao…indro ny raki-tsarin'ny zaza naratra.
小蝴蝶碎碎念：Mbola haharitra mandrapahoviana moa ny politika natao hanitsakitsaka ny olona? Matetika ry zareo no miteny hoe “Fototra tsy maintsy ilaina ny vahoaka”. Fahadalàna izany!
韩志国：Hita amin'ny gazety shinoa rehetra ny famonoana tany Etazonia, ary saika lohateny lehibe hatrany; amin'izany andro izany, manakipy maso amin'ny toe-javatra niseho teto Shina ny gazety be mpanaraka, izay hita amin'ny Weibo irery ihany. Fihetsika roa samihafa no ataon'ny gazety, satria ve tsy misy dikany loatra ny ain'ny zaza shinoa?
假装在纽约: Aza tsiniana ny CCTV raha nitatitra nandritra ny andro ny tifitra tao amin'ny sekoly amerikana, saingy tsy nitatitra kosa ny tsatok'antsy tany Henan. Ka any Etazonia daholo ny zanaky ny manampahefana ambony koa!
慕容雪村: Nisy voina nitranga tao anatin'ny fotoana iray tao amin'ny firenena roa tonta. Nandrara ny fitatera-baovao ao amin'ny fireneny ny departemanta miandraikitra izany, ka dia ny voina tany Etazonia no notateriny hatramin'ny antsipirihany. Mamerina ny fijerena azy ry zareo, mamintina, manadihady ary dia miara-miredona: Jereo ny kapitalisma ratsy!
李宪法-：Miteny ny mpanao gazety fa ny sivana no lasitry ny fomba fijerin'ny governemanta amin'ny ambaratonga rehetra raha misy voina mitranga.
浪子布回头: Ataon'ny vaovaon'ny CCTV lohateny lehibe ny fandripahana tany Amerika; saingy, nandritra izany andro izany, tsy nisy filazana sompirana akory tamin'ny faharatran'ny mpianatra 22 tany Shina. Tokony tsikeraina izany tsy fijerena ny ain'olo-tsotra izany! Tokony hiala tsiny amintsika olom-pirenena ry zareo!
Ao anatin'ireo hatezerana an-tserasera mankany amin'ny governemanta sy gazety shinoa, dia misy feo iray hafa. Hu Xijin, lehiben'ny fanoratan'ny gazety mpisolovava ny governemanta Global Times niezaka ny hamily ny fifantohan'ny mpiserasera hitodika any Etazonia amin'ny fitsikerana ny governemanta amerikana [zh]:
胡锡进：Niafara tamin'ny fahafatesan'olona 28 ny fandripahana tao amin'ny sekoly ambaratonga fototra Amerikana. Tsy hoe mampihoron-koditra ihany ny tifitra tahaka izany, fa mahatalanjona ihany koa ny fihetsiky ny governemanta Amerikana. Tsy voina eo amin'ny zon'olombelona ve io? Niteraka fahafatesana betsaka kokoa noho ny lozam-pifamoivoizan'ny fiara fitaterana mpianatra shinoa ny tifitra variraraka tany amin'ny sekoly Etazonia, saingy mbola mijoro ny governemanta ao Etazonia. Tsy azoko hoe ahoana no izakàn'ny ray aman-dreny Amerikana izany. Mampalahelo ny ankizy.
Tsy nanako ny fanehoan-kevitr'i Hu, ary nitsena tsikera maro aza. Namaly ny mpiserasera iray [zh]:
段郎说事: Ny vahoaka Amerikana no hitsara ny fomba nataon'ny fitondrana ao Etazonia amin'ity raharaha ity. Fa inona no dia tena atahoranao? Angamba tokony hiahiahy kokoa amin'ny fiarovana ny ankizy eto an-toerana ianao!
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraAbby Liu
Vakio amin'ny teny Español, Français, বাংলা, Português, Italiano, русский, 繁體中文, 简体中文, English
Amerika AvaratraAzia AtsinananaEtazoniaShina
Media sy Fanoratan-gazetyMediam-bahoakaZon'olombelona